कस्ता छन् बाथरोगका कारण? जान्नुहोस् - Everest Dainik - News from Nepal
कस्ता छन् बाथरोगका कारण? जान्नुहोस्
काठमाडौं, जेठ २२ । बाथरोगलाई मेडिकल भाषामा अर्थाइटिस भनिन्छ । सामान्य भाषामा यसलाई जोर्नी दुख्ने वा सुन्निने रोग भनेर चिनिन्छ । प्रतिरोधी क्षमताले शरीरका अंगलाई कमजोर बनाउँदा बाथरोग हुन्छ । यो शरीरका जुनसुकै अंगमा पनि हुन सक्छ । यो रोग हरेक उमेरका मानिसलाई लाग्न सक्छ । विशेषगरी, महिला, बुढाबुढी र मोटोपन भएका व्यक्ति बाथरोगबाट बढी पीडित भएको पाइन्छ । अब जानौँ बाथरोग लाग्ने कारणः
–बाथरोग अटोइम्युन अर्थात शरीरभित्रैबाट हुने रोग हो । त्यसैले, यो रोगको खास कारण भन्ने हुँदैन । तर, केही प्रतिशत बाथरोग वंशाणुगत गुणका कारणले हुने गर्छ । त्यस्तै, अत्यधिक धूम्रपान र मध्यपान सेवन पनि बाथरोगका कारण हुन् ।
–सामान्यता, बाथरोग सरुवा रोग होइन । तर, कुष्ठरोग, भाइरल डिजिज, लाइट डिजिजजस्ता केही बाथरोग सरुवारोगका हुने गर्छ । यद्यपि, यो थोरै प्रतिशतमा मात्र । यो जानकारी नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालका कायरत बाथरोग विशेषज्ञ डा. अरुण गुप्ताले नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेका छन् ।
ट्याग्स: Bath disease